You are here: Home Home Madasha Sawirrada: Toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa saddex sawir oo taariikhiya:
Durya: Waa Tuuladii laga furay saldhiggii ugu horreeyay ee SNM, waxaanay dhowr iyo toban Kiiloo-mitir koonfur ka xigtaa magaalada Allaybadey. Bishii Feeberweri 1982kii ayay halkaa degtay Guutadii ugu horreysay ee 4aad ee unugga u noqotay ciidammadii xoreynta ee SNM. Xeradaasi waxay magaalada Durya kaga taallay galbeed wax badanna uma jirin. Durya waa meel dheer oo ka muuqata dalka gudihiisa marka aad marayso ee hawaduna saafiga tahay gaar ahaan qaybo ka mid ah Gobolka Gebilay.
Madaxtooyada: Waa muuqaalkii aanu ugu soo gallay Madaxatooyada bilowgii bishii Feeberweri 1991kii.
Dugsiga Hoose ee Gebilay: Waa sidii uu Dugsigaasi u dunsanaa markii dalka la soo galay ee dib loo xoreeyay bilowgii 1991kii.